Nezvedu - Yantai Joyshing Glass Co., Ltd.
Yantai Joyshing Glass Co, Ltd. seyakasarudzika uye inotungamira inogadzira uye mutengesi wezvakasiyana zvigadzirwa zvegirazi muChina, inovavarira kupa yepamusoro imwe-yekumira girazi mhinduro kune yekuvaka, kushongedza, kutakura, kudzivirira, zororo & mitambo zvichingodaro. Joyshing Girazi inonyanya kugadzira bespoke yakakomberedzwa girazi. Tinogona kugadzira girazi rakamonyoroka kune rakanyanya kunaka chero nharaunda uye girazi redu rakamonerwa rinouya mune rakaputirwa, rakaomeswa, rakapfava (rakasungwa), uye rakapetwa kaviri, kuti rienderane nezvaunoda. Chaiwo mashandisiro egirazi redu rakamonerwa anosanganisira akakomberedzwa ezvitoro, mafafitera akakombama, magirazi egirazi akakomberedzwa uye bespoke shawa skrini.
Isu tinodada nekukwikwidza kwedu kwakasimba uko kunobva tekinoroji yepamberi uye yakasimba kudzora mhando Tagara takazvipira kutsvagisa nekusimudzira zvemberi zvekugadzira matekinoroji uye nekumisikidza yakasimba kudzora kwehunhu kuburikidza nhanho yega yega kuvimbisa zvigadzirwa zvinokodzera. Semumwe wemabhizimusi anotungamira, MUFARO unogona kupa huwandu hwakazara hwezvigadzirwa nemhando yepamusoro pamakwikwi emitengo.Curved Hedered Glass, aka kukotama girazi rakabatana, igirazi rekuchengetedza iro rinogadzirwa kuburikidza nehurongwa hwekukotamisa girazi uye kupisa kurapwa. Maitiro anoshandiswa kuwana Joyshing Girazi rakakomberedzwa girazi rakadzikama rinosanganisira kupisa girazi rakadzika kusvika padanho repurasitiki, ichipa iyo inodikanwa curvature mune yekupisa maitiro egirazi nemajeti emhepo inotonhora.
Kunze kwepamberi tekinoroji uye yakasimba yemhando yekudzora, JOYSHING's makwikwi akasimba anouyawo kubva kune hushamwari nehunyanzvi sevhisi. JOYSHING's vane ruzivo uye timu yehunyanzvi inogona zvirokwazvo kupa yakakosha uye inodikanwa rutsigiro uye mushure-kutengesa sevhisi kuvimbisa kuti zvese zvinodiwa nevatengi, zvisinei hombe kana diki, zvinogona kukurumidza uye nemazvo kugutsikana.
Girazi rakamonerwa rakapetwa rinokwira kusvika pakukwira kwesimba kwakapetwa kana ichienzaniswa negirazi rakavharidzirwa reuhombe hwakaenzana uye kana rakaputswa, rinopinda muzviverengeka zvisingaverengeke zvezvimedu zvidiki zvemamwe macube cubicle.
Girazi rakamonerwa (rakasungwa) rinogona kushandiswa kuwedzera mitsetse inoyerera ichienda kuchivako. Yakakodzerwa kuti ishandiswe mumashopu emumashopu, balustrade evheranda kana masitepisi, girazi rakamonyoroka (rakasungwa) rinogona zvakare kuwedzera kusarudzika kwakasarudzika kune imba yakagadzirirwa.